Wellhead Treatment Factory | China Wellhead Treatment Manufacturers, mpamatsy
Fitaterana mxied solika sy entona
Ny skid mitambatra amin'ny fitaterana solika sy entona dia antsoina koa hoe unit booster digital skid mounted na booster skid. Solika sy entona fifangaroan'ny fitaterana skid dia afaka mahatsapa ny fampidirana ny nentim-paharazana entona-ranoka fanafanana sy ny entona-ranoka buffer toby, lavitra fanaraha-maso ny entona-ranoka fisarahana tanky, fisarahana tanky, lavitra rafitra fanaraha-maso, sns Afaka manolo ny kely menaka sy ny entona fanangonana. toeram-piantsonan'ny toeram-pitrandrahana solika ambany permeability.
Ny skid fanasarahana fasika entona voajanahary voajanahary dia matetika ampiasaina amin'ny lohan'ny entona voajanahary sy ny sehatry ny famokarana tsara amin'ny saha condensate onshore. Loha-dranon'ny entona entona entona entona entona any ivelany.
Amin'ny dingan'ny fanadiovana sy ny famokarana entona voajanahary dia matetika misy fasika ao anaty lavadrano entona. Ny poti-pasika dia mikoriana mankany amin'ny tambajotra fanangonana sy fantsona fitaterana miaraka amin'ny entona voajanahary haingana. Rehefa miova ny làlan'ny fikorianan'ny entona, ny hetsika haingam-pandeha amin'ny poti-pasika dia hiteraka fikorontanana sy fitafy amin'ny fitaovana, valves, pipelines, sns.
Pigging transmitter sy receveur skid ho fanadiovana entona solika
Amin'ny ankapobeny dia apetraka amin'ny tendrony roa amin'ny fantsona lehibe izy io mba handefasana sy handraisana kisoa, ary azo ampiasaina amin'ny fanadiovana savoka, famafazana menaka ary fanesorana mizana alohan'ny sy aorian'ny fametrahana ny fantsona. Araka ny takian'ny mpampiasa, ny skid dia azo natao ho an'ny fampiasana roa.
Fitsapana dingana telo sy separator ho an'ny entona solika sy rano
Dingana telo fitsapana separator skid no tena ampiasaina amin'ny menaka, entona, rano dingana telo fisarahana ny solika na entona tsara vokatra, izay tsy manasaraka ranon-javatra sy ny entona, fa koa manasaraka ny menaka sy ny rano amin'ny ranon-javatra. Ny solika, ny gazy ary ny rano dia mandeha amin'ny rohy manaraka amin'ny alàlan'ny fantsona samihafa. Ny separator telo-dingana dia manerana izao rehetra izao noho ny entona-liquid separator roa-dingana sy ny menaka-rano roa separator.
Mandrindra fanerena matihanina sy skid fandrefesana ho an'ny entona voajanahary
Ny fanerena ny fanerena sy ny fandrefesana skid amin'ny toby LNG dia ahitana valva, sivana, regulator fanerena, metatra mikoriana, valva mihidy, valva fanalefahana fiarovana, milina bromination ary singa lehibe hafa, izay manome famatsiana entona azo antoka sy azo antoka ho an'ny midina ary mety. ho an'ny fanaraha-maso ny tsindry sy ny fandrefesana ny entona mari-pana ara-dalàna aorian'ny famafazana entona ao amin'ny tobin'ny LNG Reserve.
Sliding heater palitao rano ho an'ny fitsaboana entona voajanahary
Ny skid fanangonana entona voajanahary mitambatra dia fitaovana mitambatra amin'ny famokarana entona tokana izay manambatra ny rafitra famenoana simika, ny lafaoro palitao rano, ny separator, ny fitaovana fandrefesana entona voajanahary, ny fitaovana fanompoan-tsampy, ny fitaovana fanerena orifice, ny transmitter, ny fanerena entona solika, rafitra fanaraha-maso ny harafesina ary feno valves, fantsona sy fitaovana.
Tobim-piantsonan'ny Gas Regulating & Metering (RMS)
Ny RMS dia natao hampihenana ny tsindry avy amin'ny entona voajanahary avy amin'ny tsindry ambony mankany amin'ny tsindry ambany, ary kajy ny habetsahan'ny entona mandalo amin'ny gara. Amin'ny maha fomba fanao mahazatra, ny RMS ho an'ny tobin-tsolika voajanahary dia matetika ahitana rafitra fandrefesana, fanaraha-maso ary fandrefesana.
Rano entona entona solika Separator telo
Fampidirana Ny rano entona solika dia fitaovana manasaraka ny solika, ny entona ary ny rano amin'ny ranon-tsolika eny ambonin'ny tany sy ny fandrefesana marina ny famokarana azy. Mizara telo mitsangana, mitsivalana, boribory. Ho an'ny fanamorana ny fitaterana, ny separator horizontal dia matetika ampiasaina amin'ny fandrefesana famokarana. Ny rafitra anatiny ny mahazatra marindrano telo-dingana separator indrindra dia ahitana: inlet diverter, defoamer, coalescer, vortex eliminator, demister, sns Effect Whe...
Ny tsindrona tsindrona amin'ny corrosion inhibitor
Ny skid famenoana fatra simika dia antsoina hoe dosing sy tsindrona skid, skid odorization. na skid inhibitor corrosive.
Ny fanerena sy ny fanerena skid, antsoina koa hoe PRMS, dia ahitana ny mahitsizoro skid, mifehy manifold, fanaraha-maso valves, fandrefesana sodina, flowmeter, mifehy valves, mifehy sodina, sivana, Outlet sodina, inlet manifold, rivotra fidirana, fivoahana manifold, blowdown sodina ary valva fanala fiarovana. Ny manifold mandrindra dia eo anoloana, ny manifold fivoahana eo afovoany, ary ny manifold inlet ao aoriana.